IMIZUZU: UKUNYUKA KOMHLA WOKUKHUTSHWA KWEGRU, NGUBANI NA OFAKWE KWICAST? IQONGA, ITRAILER KWAYE YINTONI ESIYAZIYO NGALE BHANYABHANYA? - IIMUVI
I-Minions: Ukunyuka kwe-Gru, kuya kuphawula ukubanjwa kwesihlanu komkhosi otyheli, ojijekileyo. Iimbalelwano zenza amatyala abo
Imizuzu: Ukunyuka kweGru , iya kuphawula ukubanjwa kwesihlanu komkhosi otyheli, ojijekileyo. Imizimba yenza amatyala abo ecaleni kukaGru ngo-2010. U-Sine emva koko uthotho lube yenye yezona zinto zililungelo eliphambili lokufumana oopopayi. Kwaye ii-minion ngoku zezona zidalwa zithandekayo kwiscreen.
Ngethemba lokugcina olo thando luphila, ukhanyiso lubuya nemboniso bhanyabhanya yamva nje yelungelo lokuthengisa. Ukulandelelana kwee-Minions zika-2015, uthotho luya kuphinda luye kwi-70s. Ekhokelwa nguKyle Balda, ifilimu ayizukuba mfutshane kulonwabo. Kuhleli ukuba kubonwe, nokuba ngaba ifilimu ingahambelana neendawo eziphakamileyo ezibekwe yi-franchise kule minyaka ilishumi idlulileyo.
Imizuzu: Ukunyuka kweGru: Nguwuphi uMhla wokuKhutshwa?
I-buzz ejikeleze ifilimu iyaqina njengoko u-2020 eqengqelekayo. Ifilimu ijongeka ngathi iza kubetha kwimidlalo yeqonga ngoJulayi. Kodwa loo nto yayide yabakho ubhubhane. Umboniso bhanyabhanya wawukwinqanaba lokugqibela lokugqitywa eParis xa urhulumente waseFrance wavala urhulumente kangangenyanga.
Ngezinye iingxaki zempilo ezinobunzima, Ukhanyiso luthathe isigqibo sokulibazisa ukukhululwa yefilimu. Ke nge-1 ka-Epreli, indlu yokuvelisa yaphinda yahlengahlengisa ukukhutshwa kwefilimu ngoJulayi 2, 2021. Ngokuchanekileyo unyaka ukusuka kulindelo lwayo olulindelekileyo.
Imizuzu: Ukunyuka kweGru: Yintoni iPloti?
Ifilimu iya kuba ithatha apho ifilimu yokugqibela ibishiye khona. Ukuphela kweMinion, sabona iqela lifumana inkosi yalo entsha ukuba ilandele kuThixo. Kule filimu, usengumntwana kwaye unqwenela ukuba yinxalenye yeqela lakhe alithandayo le-supervillain- Vicious 6.
Xa iqela lidubula inkokeli yalo, uGru ulibona njengethuba lokufezekisa amaphupha akhe. Kodwa uyaliwe kwaye azingqina ukuba unexabiso, kwaye umphathi wexesha elizayo uyeba kubo. Ngoku ekubalekeni, uGru kunye neqela lakhe babalekela kwi-Wild Knuckles ngoncedo lwakhe. Wonke umntu uyazi ukuba uGru ukhula abe yintoni. Kwaye esi siqendu siza kuqinisa kuphela ikamva lakhe.
Imizuzu: Ukunyuka kweGru: Ngoobani abakwiCast?
Xa kuziwa kubalingisi befilimu, kuya kubakho amazwi ambalwa aqhelekileyo. UPierre Coffin ngu Ilizwi lomfanekiso emva kukaStuart, uKevin, uBob kunye nayo yonke iMinion. Ke ngaphandle kwakhe, umboniso bhanyabhanya awunakuba nakho ukulawula. Omnye umdlali obuyayo nguSteve Carell. Ngeli xesha umdlali weqonga uza kufezekisa into engenakwenzeka kunye nelizwi lomntwana uGru.
Amanye amagama athandwayo anxulumene no-Alan Arkin, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh kunye ne-RZA. Baza kujoyina uJean-Claude Van Damme, uLucy Lawless noDolph Lundgren.
Imizuzu: Ukunyuka kweGru: Ngaba iTrailer iphumile?
Ewe i-trailer iphumile. I-Universal ikhuphe i-trailer ye-movie ezayo ngexesha le-Super Bowl LIV kulo nyaka. Oko kwakusenzeka xa ifilimu yayilindele ukukhutshwa kulo nyaka. Kodwa yinike iwotshi kwakhona, ii-Minions azidiki.
Itreyila inike abalandeli isizathu esaneleyo sokuba bonwabe. Kwaye ngelixa umboniso bhanya-bhanya usenomzuzwana, ulindelo luphezulu. Yintoni eqinisekileyo yile Minions: Ukunyuka kweGru, ayizukubathoba abalandeli.
Ixesha le-rhobh 11 isiqendu 3
Iqhawe lam lezemfundo ixesha lesi-5 isiqendu 3 sokukhutshwa komhla
sherlock isizini 3 umhla wokukhutshwa
yaphuma nini imovie yesmurfs
liphuma nini ixesha elitsha lesipili esimnyama
kumhla wokukhutshwa kwendinyana yesigcawu